Badhasaabka Awdal oo kormeeraya degmooyinka gobolka ee Goleyaasha deegaanku isku dooranayaan | Somaliland.Org
Badhasaabka Awdal oo kormeeraya degmooyinka gobolka ee Goleyaasha deegaanku isku dooranayaan
December 21, 2012	Boorame (Somaliland.Org)-Badhasaabka Gobolka Awdal iyo Wafti uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in safar qaadan doona mudo dhawr maalmood ah ay ugu kicitimaan dhinaca degmooyinka Saylac, Lughaya iyo Baki, halkaasi oo ay kaga qayb gali doonaan doorashooyinka maayarada ee Degaamadaasi.
Wafdigana ayaa lagu wadaa inuu maalinta Sabtida ah goobjoog u noqdo doorasho iyo dhaarin is huwan oo ay xildhibaanda degmada Baki ka samayn doonaan degmadaasi Baki.
Wafdigan ayaa lagu wadaa inuu gaadho magaalada Lughaya Maalinta Axada ah halkaasi oo ay kaga qayb gali doonaan dhaarin iyo dooorasho degamadaasi Lughaya ah oo ay samayn doonaan xildhibaandii halkaasi ka soo baxay.
Waxa kale oo ay wararka laga helayo Lughaya sheegayaan in ay maanta oo Jimce ah baaqatay doorasho ay u balansanaayeen 10 xildhibaan oo degaankaasi Lughaya ah, oo ay ka maqan yihiin 3 xildhibaan oo beesha Ciise uga soo baxay degmada Lughaya, kadib markii uu badhasaabka G/Awdal ku war galiyay inuu ku soo socdo loona baahan yahay inay sharciyada dhawraan.
Wafdigan ayaa waxa ay ku hoyan doonaan maalinta habeenimada Isniintu soo galayso magaalda Saylac, halkaasi oo ay ku sugayso inay kala guraan hawsha doorashada maayarka degmada Saylac oo isku cakiran.
Wafdigan ayaa waxa suurto gal ah inay shari daro ku tilmaamaan doorashadii dhawaan ka dhacday degmada Saylac, ee lagu doortay maayarka cusub, isla markaana ay codsadaan in xildhibaanada la doortay oo dhan ay isugu yimaadaan madal kaliya isla markaana ay doortaan hogaan loo wada dhan yahay.
Ma cada in xildhibaanada 7 ah ee ay Saylac ka heleen beesha Ciise ay diyaar u noqon doonaan inay kulankan ka soo qayb galaan iyo in kale balse waxa la xusi karaa in tagitaanka Badhasaab Xadi ee degmada Saylac ay waxbadan soo afjari doonto.
Previous PostBooliska Sool Oo Gacanta ku soo dhigay dabley dilal ka fulisay LaascaanoodNext PostBadhasaabka Saaxil oo xilkii laga qaaday & Xamarje Oo Badhasaabka Maroodi-jeex lagu celiyay	Blog